Hiriirri Har’a Maqaleetti godhame kaayyoon isaa guddaan – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHiriirri Har’a Maqaleetti godhame kaayyoon isaa guddaan
Hiriirri Har’a Maqaleetti godhame kaayyoon isaa guddaan
Hiriirri har’a Maqaleetti godhame kaayyoon isaa guddaan ”deeggarsa araara Itiyoo Eertiraati haa jedhamu malee dubbiin faallaa dha. Maaliif kana jenne?
1. Dhaadannoon dhimma kana laalchisee katabamee mul’atuu fi dhaadatamaa oole ”araarri Itiyoo Eertiraa ummatoota gama lamaanii qofaan mirkanaawa” jedha. Kana jechuun ummata Tigree laga Marab gamaa fi gamana qubatuutiin mirkanaawa jechuudha. Kunis ergaan isaa guddaan, araarri dheengadda mootummoota lamaan gidduutti godhame eessayyuu hin gahu, araaricha kan milkeessuu danda’u nu (ummata Tigiree) qofa jechuudhaan adeemsa araaraa hanga ammaatti godhame mormuu yookiin gatii dhowwachuu dha. (Dubbii kana irratti kaleess MM Dr. Abiyyi DC keessatti haasaa godheen ”olola mandara keessaatiin wanti gufatu hin jiru” jechuun jara kanaaf ergaa dabarseefii jira.)
2. Hiriiricha irratti ajjechaa Injiner Simmanyawu Beqqeleef kan shakkamu warra TPLF fi mul’ata Mallas Zeenawii jibbu ergaa jedhutu bal’innaan dabarfamaa oole. Kunis naanna’ee naanna’ee hoggansa haaromsaa amma jirutti quba qabuu dha. Hidha Hiddaaseef kan quuqamu na malee hin jiru ergaa jedhuutu TPLFiin dabarfamaa jira. Milkii hidha kanaa gufachiisuuf jecha Injinericha kan ajjeese diinota keenya jechuun shakkamtummaa isaanii ofirraa qolataa jiru.
3. Faallaa hiriirota biyyattii keessatti geggeeffamaa turaniitiin hiriirri Maqalee kun deeggarsa MM haaraa Dr. Abiyiif osoo hin taane mormii isaaf kan bahame jechuutu salphata. Hiriirtota kumoota hedduu keessaa kan suuraa MM qabatee kaayyoo haaromsa isaa deeggaruun mul’ate tokkolleen hin jiru. Kunis siyaasaa biyyattii yeroo ammaa irraa Tigraayiin ifatti adda godheera. Faallaa kanaan suuraa wareegamtoota isaanii bara qabsoo fi kan Mallas Zeenaawii guurratanii yaa’an.
Akka fakkeenyaatti suuraan armaan gaditti mul’atu kun ”Imaanaa keessan hin nyaannu, waan jalqabdan ni xumurra” jedha. Kunis mul’ata Mallas Zeenaawii sababa ajjeechaa injinerichaatti qabatanii haaromsaa jiraachuu garsiisa. Tarii injinericha ofumaa ajjeesanii isaan qabatanii mul’ata Mallas Zeenaawii ittiin haaromfatanii leellisuuf, kanaanis qabatanii mul’ata MM haarayaa ittiin rukutuuf yaadan ta’innaa?
TPLF officially threatens to separate from Ethiopia
28 July 2018 – “Either we live together in respect or disintegrate Ethiopia”, said Tigray People’s Liberation Front (TPLF) Chairman Debretsion Gebremichael today.
The crowd shouted out ‘Yidegem [repeat]’ with jubilation.
This is the first time TPLF has reintroduced the 1976 independence manifesto to the people of Ethiopia.
A segment of report by an Eritrean media on TPLF’s call for a possible secession
Via: EritreanPresss FB
TPLF officially threatens to separate from Ethiopia-“Either we live together–